Vaovao - Inona no andraikitry ny dumbbells
1. Inona no vokatry ny fanaovana dumbbells hanatsarana ny firaisana ara-nofo
Ny squats Dumbbell dia noheverina ho safidy voalohany amin'ny fahasalaman'ny lehilahy. Rehefa manao squats dumbbell dia afaka mampiroborobo ny tsiambaratelon'ny homamiadana lahy ary tena mandaitra amin'ny fampiroboroboana ny fiasan'ny lahy sy ny vavy.
2. Inona no vokatry ny fanaovana dumbbells hampihenana ny lanja?
Raha hampihena ny tavy ny tanjon'ny fampiasana dumbbells, dia asaina manao repoblika 15-25 na mihoatra isaky ny vondrona. Ny elanelana misy ny vondrona tsirairay dia fehezin'ny 1-2 minitra. Rehefa misafidy dumbbells dia misafidiana maivana kokoa, mba tsy hampiofana hozatra be loatra ary hivoatra loatra.
3. Inona no andraikitry ny dumbbells hananganana hozatra
Ny fanarahana maharitra amin'ny fanazaran-tena dumbbell dia afaka manova ny tsipika hozatra ary mampitombo ny fiaretana hozatra. Ny fanazaran-tena tsy tapaka miaraka amin'ny dumbbells mavesatra dia afaka manatanjaka ny hozatra, manamafy ny tavy hozatra ary mampitombo ny tanjaky ny hozatra. Afaka manao hozatra ambony hozatra, hozatra ary hozatra kibo. Ohatra, rehefa manao sit-ups, ny fihazonana dumbbells amin'ny tanana roa ao aorian'ny vozona dia mety hampitombo ny enta-mavesatry ny hozatry ny kibo; ny fihazonana dumbbells ho an'ny fanatanjahana an-tsokosoko na fanatanjahan-tena dia afaka mampiasa hozatra mivaingana anatiny sy ivelany; mihazona dumbbells mahitsy Ny hozatry ny soroka sy ny tratra dia azo ampiasaina amin'ny fampiakarana ny sandry mandroso sy avy eo. Afaka manao hozatra ambany rantsam-batana. Toy ny mitazona dumbbells hikopaka amin'ny tongotra iray, hikorisa amin'ny tongotra roa ary hitsambikina.
4. Inona no andraikitry ny fiofanana dumbbell hamahana ny fanjakana tsy mahay mandanjalanja
Ny olona tsotra dia tokony hanana "tanana manjaka", izay miharihary kokoa amin'ny fiofanana mavesatra. Ny olona sasany dia hanana tsy fifandanjana amin'ny herin'ny hozatra havia sy havanana (na ny halehiben'ny hozatra) noho ny fampiasana maharitra ny fampiofanana tanana mazàna. Ahoana no hamahana azy? Dumbbells dia fitaovana fanitsiana tena ilaina.
Satria tsy voatery ny lanjan'ny dumbbell. Azonao atao ny manatanjaka amin'ny lafiny malemy; na mampiofana ny lanjany zakan'ny ilany malemy, mandra-panamboaran'ny saika ny tanana roa. Na izany aza, voafetra ny fanitsiana ny tanana tsy manjaka. Rehefa dinihina tokoa, ny olona dia mbola manana tombony amin'ny tànana mibahana, ary mety tsy hahatratra ny fahalavorariana mitovy izy ireo.
Inona avy ireo fanazaran-tenan'ny dumbbells ao an-trano
1. Mitsangàna, mihazona dumbbell amin'ny tànany tsirairay, mifanatrika ny felatanana. Ataovy somary miolikolika ny sandrinao, ary atsangano ny dumbbells etsy sy eroa mba hahatratra kely ny haavon'ny soroka. Mijanona kely, avy eo midina moramora ary avereno.
2. Famonoana romana: mijoroa, manosika dumbbells roa miaraka amin'ny palma ary ahantona eo anoloan'ny vatanao. Amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny valahana, avelao hianjera hiverina any amin'ny voditongony ny lanjan'ny vatana, aondriho kely ny lohalika, ary apetaho amin'ny valahany eo afovoan'ny tibia ny dumbbel Avereno amin'ny toerana fiandohana dia avereno.
3. Vorona Dumbbell: Mandry amin'ny dabilio fisaka miaraka amin'ny tongotrao amin'ny tany. Atosory eo ambonin'ny tratranao ny dumbbells roa, mifanatrika ny felatanana. Ajanony somary miondrika ny sandrinao, ary ampidinino moramora ireo dumbbells mandritra ny arc raha tsy mitovy amin'ny tany ny sandry ambony. Mijanona mandritra ny fotoana fohy, avy eo avereno amin'ny toerany manomboka ny dumbbell miaraka amin'ilay arc hafa ihany, ary avereno.
4. Dingana ambony: Mihazona dumbbells roa ary ahantona eo anilanao. Mijoroa eo amin'ny sisiny manatrika ny seza fisaka, manitsaka ny tongotra toradroa, ary apetraho eo amin'ny seza fisaka ny tongotrao ankavanana. Atsofohy mafy amin'ny tongotrao ankavanana ary ento eo amin'ny dabilio ny vatanao mandra-pahatonga ny tongotrao hisosotra eo ambonin'ilay dabilio. Avy eo manitsaha eo ambanin'ny tongotra havia hamerina ny vatana amin'ny toerana manomboka. Avy eo manitsaka ny tongotra havia, avereno, ary avereno indroa ny lamosina.
5. Fanarenana dumbbell indroa: Tazomy amin'ny palma ny paosy roa. Ataovy miondrika kely ny lohalinao, mahitsy ny lamosinao, ary miondrika 90 degre ny valahanao. Hisintona ny dumbbell hatrany amin'ny kibony ary kitiho ny hozatry ny kibonao amin'ny felatananao. Avereno miadana ary avereno.
Fanamarihana fanatanjahan-tena Dumbbell
1. Ny lanjan'ny dumbbell voafantina dia maivana loatra ka tsy hahatratrarany ny vokatry ny fisintomana ny fangatahana ao an-trano, ary tsy afaka manapaka ny fandanjana mavitrika amin'ny vatana; mavesatra loatra ny lanjan'ny dumbbell, simba be ny fandanjana mavitrika ny vatana, sarotra ny mamerina azy io, ary matetika izy io tsy ny vokatr'izany. . Raha toa ny tanjon'ny fanatanjahan-tena dia ny fahazoana hozatra, afaka misafidy dumbbells ianao amin'ny 65% ​​-85% entana. Raha hampihena ny tavy ny tanjon'ny fanatanjahan-tena dia afaka misafidy dumbbell somary maivana kokoa ianao, toy ny 3 ka hatramin'ny 5 kg eo ho eo.
2. Aza matavy loatra. Ny dumbbells be loatra dia mora manaparitaka ny hozanao, izay tsy hahatratra ny vokan'ny fiofanana. Amin'ny ankapobeny, ny zazavavy dia manao dumbbells mba hampihena ny lanjany sy hamolavola ny vatany. Misafidy dumbbells ny vehivavy, aza misafidy dumbbells mavesatra be toa ny zazalahy. Ny zazavavy dia tokony ho maivana sy antonony, ary ny lanjan'ny dumbbells dia tokony fehezina amin'ny 1 kg eo ho eo.
3. Ny fampiakarana miadana sy ny fampidinana miadana dia handrisika ny hozatra lalindalina kokoa. Manokana, rehefa mametraka ny dumbbells ianao dia tsy maintsy mifehy ny hafainganana ary manao fanazaran-tena concessional handrisika tanteraka ny hozatrao. Betsaka ny olona tsy miraharaha ny fampihetseham-batana. Na dia nakarina ho an'ny asa vita aza ny dumbbell dia apetraka haingana izy io, mandany fotoana lehibe ahafahana mampitombo ny hozatra. Ny hetsika iray amin'ny ankapobeny dia maharitra 1 ka hatramin'ny 2 segondra.